Khabar Break - साहित्य
Monday 23rd of October 2017, 7:06:12 pm
Thursday 31st of August 2017, 07:07 PM
सोझि देखेँ माया लाएँ,जालि रैछ झेल भयो ।। फुल बिनाको रित्तो उ,डालि रैछ झेल भयो ।। मन मुटु चोखो प्यार दिनु सम्म देकै थिएँ , तर।।मेरो लागि उसको प्यार,खालि रैछ झेल भयो ।। मेरो मुटु रेट्न उनले,तरबार बनाइन् ।। मलाई छाडि अर्कैसँग,घरबार बनाइन् ।। मेरो गरिबीको उनले फाइदा उठाएर, पराईसँग सपनाको,दरबार बनाइन् ।। काम हुञ्जेल भाँडो हुने,रित रैछ तिम्रो ।। जो सँग नि जोडिदिने,प्रित रैछ तिम्रो ।। भो भो नसुनाउ भो,त्यो तिम्रो प्रेम...
Tuesday 29th of August 2017, 04:47 PM
मन साँट्नेहरु भेटिन्छन्, मुटु साँट्नेहरु भेटिन्छन् । तिमी मेरै हौ भन्दै मलाई आँट्नेहरु भेटिन्छन् । जब मदनको जातको चर्चा पाएपछि सहरमा अनि बजारभरि कुरा काट्नेहरु भेटिन्छन् । । । हरपल सम्झिन्छु भन्नेले भुलेका छन मुटु झिकी दिन्छु भन्नेले भुलेका छन हो आज बिच बाटोमै छोडी गाकी छौे जीवन भरी साथ दिन्छु भन्नेले भुलेका छन । तिम्रो घरमा बिहेको होम चल्दै गर्दा । मेरो यता घाट तिर लास जल्दै गर्दा अरु थप के के होला सोच्न थाल प्रिय फरक धारका घटनामा आगो...
Wednesday 23rd of August 2017, 05:06 PM
2074 भाद्र 8 गते महिलाहरु को विशेष चाड तिज को पावन अबसरमा सम्पुर्ण नारिहरू बिदेशमा कामकाे खाेजिमा जानुभएकाे र स्वादेशमा नै बसाे बाँस गार्ने महिलाहरूलाई हरितालिका तिजकाे हार्दिक मंगलमय शुभकामना । नारिका हिंसा बारेमा लेखिएकाे गजल । उत्पिडितका पीडा ब्थाया देख्छ यहाँ कस्ले उनिहरूका काहानि लेखेछ यहाँ कस्ले । नारि अधिकारबादिले नै बलत्कार गर्छन् भने यस्तै महिला हिंसा छेक्छ यहाँ कस्ले । उता सहरमा डाक्टर नारि यता गाउमा बाेक्सि अरे उनी...
मनहरीका दिल बाहादुुरको ३ हात (पढ्नुहोस उहाको जिवन कथा)
Tuesday 22nd of August 2017, 05:36 PM
जन्मजात खोट थियो होला मैले यस्तै सोचे । त्यसैले आज दुर गतिको जिवन बिताइराख्नु परेको छ । मेरो मनमा खुल्दुली चल्यो र मैले उहालाई सबै कुरा सोधे, बास्तव मै मैले सोचेको भन्दा फरक थियो उहाको जिबन । यस्तो छ उहाको जिवन कथा । म मकवानपुरको मनहरी गाउँ पालिका वडा न. ६ प्रतापपूरमा बसोबास गर्दछु । मेरो नाम दिल बाहादुुर प्रजा हो । मेरो सानै उमेरमा बिबाह भयो । अहिले म अनि मेरो बुढी मात्र छौ । केही समय पछि ३ छोरा र २ छोरी जन्मिए । छोरी दुईटै कलिलै उमेरमा पोइला गए । छोराहरु...
Tuesday 22nd of August 2017, 04:45 PM
तिमी र म एक हुने,आधार बनाउँछु ।। हाम्रो चोखो पिरतिको,सार बनाउँछु ।। तिमी हतारमा छ्यौ, म फूर्सद मा छू, तिम्रो ईच्छ्या पुरा गर्न,घरबार बनाउँछु ।। तिमी भन्छ्यौ क्यारि,पाल्नु हुन्छ र ! म तिमीलाई राख्ने,दरबार बनाउँछु ।। समाजको डरै छैन अामा बा'को कुरै छोड मुना मदन बिर्सिदिने,प्यार बनाउँछु ।। आउ हाम्रो फरक पार्टी एकीकृत गरौ प्यारि, तिम्रो मेरो दिर्घकालिन,सरकार बनाउँछु ।।...
Saturday 19th of August 2017, 12:38 PM
हो साथी, तिमी माथि ! हरेक कुराले छौ साथी तिमी माथि ! त्यसैले, क्रान्तिको नारा भिर गर या नगर, तर साथी ,तिमी माथि ! मलाई आग्रह पुर्वाग्रह छैन कुनै कुरामा किनकि, तिमी हरेक कुराले माथि छौ! नपत्याए, जातको सर्टिफिकेट चेक गर भौतिक अवयवहरू जाँच गर जोख तिमी र म तराजुमा सक्छौ, बढाउ तिमी र म बिचको खाडल चुम सगरमाथा! तर अनुरोध, यो धरातल नबिर्स मलाई थाहा छ, कि यो पृथ्वी गोलो छ। मलाई अपशोच छैन, आत्माग्लानी छैन मनमा, दुखेको पनि छैन मेरो मन, किनकि, तिमी जातले ठूलो...
जव प्रेमीले कुमारित्व जाँच गर्न भन्दै शारीरिक सम्पर्क राख्ने प्रस्ताब गर्‍यो…..
Friday 18th of August 2017, 07:51 AM
लेखिका / रुपनी जि.एम कुरा कार्तिक महिनाको तिहार ताकाको हो रे । रातीको १० बजे पछि नम्रतालाई उनको साथी सुशीलाको फोन आयो, र कुनै सम्बोधन नै नगरि निकै आक्रोशित आवाजमा शुरुमै सोधियो रे–“ओए ! मायामा विश्वास दिलाउन के शरिर नै सुुम्पनु पर्ने हो र ?” नम्रता अक्कनबक्क पर्छे र आश्चर्य मान्दै सोध्छे–“के भन्छे यो ? बौलाउन त लाईनेस् ? कस्ले के भन्यो र तलाई ?” अरु कस्ले हुन्छ र ? तलाई भनेकी थिएँ त ? उही के, मैले माया गर्ने गजे । गजे, पुरा नाम गजेन्द्र कार्की । घर...
गोविन्द केसी तिमी याद आउनेछौ [कविता]
Saturday 12th of August 2017, 10:45 AM
गोविन्द केसी तिमी याद...
गोविन्द केसी मृत्युशैयामा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि लडिरहँदा हामी 'माइली साइरस' र 'निक्की मिनाज'का नग्न गीतहरुमा हराइरहेका छौं तर एकदिन यस्तो त दिन आउनेछ जब हाम्रो मगजमा गोविन्द केसीमात्रै याद आउनेछन् जब पैसा नभएर ज्यूँदो लास अस्पतालको ढोकाबाट फर्कनेछ गोविन्द केसी तिमी याद आउनेछौ जब सानो अपरेसन गर्दा आफन्तको अकालमै ज्यान जानेछ सर्पजस्ता नक्कली डाक्टरहरुले विरामीलाई डस्नेछन् जब १० गुणा चर्को मूल्यमा औषधि किन्दा गाउँको खेत बन्दकी...
लोग्नेको साथ रातिको ओछ्यान मात्र हो ?
Thursday 10th of August 2017, 08:47 AM
भावना प्रसाईं व्यस्त दैनिकीले नैतिक दिनहुँजसो थकित हुन्छ । परिवारलाई राम्रोसँग समय दिन सकेको छैन उसले । अब त उसलाई, घर परिवारभन्दा पनि काम नै प्रिय लाग्न थालिसकेको छ । बेलुका घर जाँदा बच्चाहरु सुतिसक्छन अनि आफू बिहान घरबाट निस्किँदा उठेकै हुँदैनन् । कसैको पिता भएर पनि पिता हुनुको महसुससम्म थिएन उसलाई । श्रीमतीको सामीप्यताको आवश्यकताले उसले एकरात निदाएकी श्रीमतीलाई बिउँझायो । श्रीमानको चाहना पूरा गरेको मौकामा सीमाले भनी, “बिहेपछि हामी एकै दिन...